Malunga nathi -Suzhou Bricmaker Ukuzenzekelayo Co., Ltd.
Thina BricMaker ngobuchule ngodongwe (sintered) izixhobo zokwenza izitena, i-R & D, ioyile kunye nesisombululo sezityalo zezitena.
I-BricMaker igubungela iihektare ezingaphezu kwe-10, ine-30,000 yeemitha zesikwere zemveliso, kunye notyalo-mali olupheleleyo lwe-USD yezigidi ezingama-30, kwaye phantse abasebenzi abangama-200 ababandakanya iqela lamagcisa angama-90 kunye neenjineli.
Kule minyaka ili-10 idlulileyo, uBricMaker wenze utyalomali olukhulu lodongwe (sintered) izixhobo zetena i-R & D, yamkela itekhnoloji yemveliso eqhubekekayo kunye nezixhobo zethuluzi, zibonelela ngesisombululo esibanzi sezityalo ngezitena zokuvavanya uhlalutyo, imveliso yoyilo lobunjineli, uyilo lweetonela, isisombululo sokwakha, ufakelo lwezixhobo & Ukuyalela, uqeqesho lobuchwephesha kwezobuchwephesha njlnjl. Sibonelela ngenkxaso yezobuchwephesha eyomeleleyo kumashishini esitena amaninzi ekhaya nakwamanye amazwe.
Imigca yemveliso engaphezulu kwama-2000 yasekwa nguBricMaker kude kube ngoku ekhaya nakwamanye amazwe, iBricMaker iqinisekisa iiprojekthi zabathengi ngoqoqosho, ukhuselo lokusingqongileyo, ukonga umbane, oomatshini bokucoca, kunye nokucoca umboniso, ukunceda amashishini abathengi bethu ukuba bafumane izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye baqonde Ixabiso lobomi!
I-BricMaker ngo-2008 yaphumelela iNkqubo ye-ISO9001 yoLawulo loMgangatho, i-OHSAS18001 yeNkqubo yokuLawulwa kwezeMpilo noKhuseleko, kwaye yaphumelela iwonga le- "Corporate Credit Evaluation of AAA Credit Enterprise", "i-China Brick Industry Association engu-Sekela Mongameli we-Sixth Unit", "i-Wall Materials (sintering) Isixhobo esenziwe ngamashishini alishumi aphezulu "," Ishishini eliPhambili lezinto zoKwakha oMgangatho oSebenzayo oSebenzayo "njl.
Umsebenzi woMenzi weBricmaker
Siyi-BricMaker sikunika izixhobo zekhwalithi ephezulu kunye nesisombululo setekhnoloji, ukukunceda ufumane izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye uqonde ixabiso lakho lobomi!